Snowdrift Waa maxay, sidee loo sameeyay | Saadaasha Shabakadda
Markaan ka hadlayno barafka, waa lama huraan inaad maqasho erayga daadad baraf ah. Glaciers waa muhiimad weyn adduunka oo dhan, kaliya maahan inay keydsadaan xaddi badan oo biyo macaan, laakiin maxaa yeelay waxay xasiliyaan nidaamyo badan oo deegaanka ah. Snowdrifts waa aagag laga sameeyay barafleyda dhexdooda waxayna sidoo kale muhiim u yihiin qawaaniinta iyo astaamaha nidaamka deegaanka.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa waxa barafku yahay, sida loo sameeyo iyo kan ugu weyn Spain.
1 Waa maxay baraf-dhaca?
2 Snowdrift ee Countess
3 Yaraynta cabirka snowdrifts
Waa maxay baraf-dhaca?
Waxaad u badan tahay inaad maqashay wax ka badan hal jeer. Qabowga barafka waa aag buurta laga helo baraf fara badan. Haddii aad waligaa tagtay buur baraf wata, waxaad arki doontaa aag ay ku jiraan baraf badan oo urursan. Xitaa barafkani wuxuu awood u leeyahay inuu si joogto ah u adkeysto heerkulka ugu sarreeya oo uu jiro xitaa xagaaga.
Tani waa sababta oo ah baraf-dhacayaasha waa aag laga ilaaliyo howlaha saadaasha hawada. Duufaannada barafka ee dhaca iyo barafleyda xilliga qaboobaha oo dhan waxay ku ururiyaan baraf meelahaas. In aad uga badbaado dabaysha, ka shucaaca qoraxda iyo qodobo kale oo deegaanka ah, waxay awood u leedahay inay sii harto.
Doorsoomayaasha kale ee saameynaya cabirka snowdrifts waa baraf urursiga. Barafku markuu sii ururayo, ayuu sii dheeraanayaa inta uu sii ururayo. Tani waa tan ka dhigaysa xasillooni cayiman meelaha kala duwan ee buurta ee la jaanqaaday heerkulkan, huurka iyo jiritaanka barafka iyo barafka.
Waxaan helnaa cufanno waaweyn oo caan ah sida barafka 'Condesa glacier', oo ku yaalo Sierra de Guadarrama. Wadamada kale sida Argentina iyo Chile magacan sidoo kale waxaa loogu isticmaalaa in loogu yeero meelaha qaar ee barafleyda Patagonia. Waxaa jira meelo badan oo buuro ah oo barafka lagu keydiyo agagaarka webiyada afkooda ama harooyinka u dhow. Kala daadsanaanta joogtada ah ee barafka ayaa ah waxa quudiya jidhkan biyaha ah.
Snowdrift ee Countess
Baraf-dhacaas aan kor ku soo sheegnay waa mid caan ah. Waxay ku taalaa Sierra de Guadarrama waxayna qiyaastii 2.000 mitir ka sarreysaa heerka badda. Baraf-dhacaani wuxuu leeyahay isticmaalkiisa tan iyo markii dadku isticmaalaan barafka lagu keydiyo xilliga xagaaga. Kala dhalaalida barafkan tartiib tartiib sannadka oo dhan waxay kordhisaa qulqulka Webiga Manzanares.
Baraf-barafkan kaliya kuma koobna barafka si toos ah roobka, laakiin sidoo kale kan ay wataan dabeylaha, dabeylaha iyo barafleyda. Waa aag laga gabbaadsan yahay meelaha sarsare halkaasoo aad ka heli karto tiro badan oo baraf uruursan sanadka oo dhan.
Waxaa loo isticmaali jiray horaantii qarnigii XNUMXaad ilaa dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad in lagu uruuriyo barafka. Barafka waxaa lagu daabulay gaariyo ay baaluhu soo jiiteen oo la geeyay magaalada Madrid iyo degmooyin kale. Barafka waxaa loo isticmaali jiray in lagu ilaaliyo cuntada qabow iyo in la cusbooneysiiyo cabitaannada qaarkood. Maskaxda ku hay in waqtigan aysan jirin qaboojiyeyaal ama qaboojiyayaal. Kadib, barafka dabiiciga ah ee sanadka oo dhan ku ururay ayaa loo adeegsaday ujeeddooyinkan. Si kor loogu qaado adeegsiga barafkan, gidaar dhagax ah ayaa laga sameeyay qaybta hoose, si barafku si dhib yar oo tiro badan ugu ururay.
Baraf-baxahan ayaa ah midka ugu muhiimsan wejiga koonfureed ee Sierra de Guadarrama. Dhererkiisu waa 625 mitir iyo ballac dhan 80 mitir. Meelahan oo dhan waxaa ku daboolan baraf sanadka oo dhan.
Yaraynta cabirka snowdrifts
Sanadihii la soo dhaafay, guud ahaan aaggeedu wuu sii yaraanayay sidii la filayay. Kordhinta heerkulka ay soo saartay kororka saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo Waxay keenaysaa baraf yaraan iyo yaraan ah inuu uruuro sababo kala duwan awgood. Midka koowaad waa hoos u dhaca roobabka oo qaab baraf ah. Iyadoo taas, dabaysha ama barafleyda ama duufaanta midkoodna ma qaadi karo waxyaalo aad u badan. Midda labaad ayaa ah koror guud oo heerkulka sannadka oo dhan, taasoo adkeyneysa in la ilaaliyo barafka.
Thanks to dhalaalida xilliga xagaaga, Wabiga Manzanares waxaa lagu quudiyaa biyo. Iyada oo dhalaalku macnaheedu maahan in isku ururinta barafka uu baaba'o. Taas bedelkeeda, waxay yaraynaysaa muggeeda. "Sixirka" goobahan ayaa ah illaa guga, wali waxay leeyihiin baraf ballaaran oo baraf ah oo keyd ah.
Isku soo ururinta barafka ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah celceliska heerkulka aan helno sanadka oo dhan. Celceliska celiska barafka ee Condesa waa 5 darajo. Roobabku waa 1400 mm sanadkiiba, oo ay ku urursadaan saddex meelood meel meel xilliga qaboobaha. 365 maalmood sanadkii, barafku wuxuu socdaa 250 maalmood, waana guul weyn.
Sida dhirta, waxaa loogu talagalay joogitaanka barafka. Waxay leedahay doog yar oo dhir yar iyo dherer gaaban. Badanaa way ubaxaayaan marka dhalaalku dhaco oo waxay daboolaan ilaa 33% dhulka. Dhirta ugu badan ee aagaggaas waxaa ka mid ah joornaalada iyo cawska ilma galeenka. Waxa kale oo jira qaar ka mid ah moosaska iyo dhirta dhirta leh laakiin yar yar.
Oo ay la socdaan kuwa snowdrifts, waxaa hubaal ah inaad sidoo kale maqashay goobaha barafka. Goobtan barafka ah waxaa loola jeedaa wax la mid ah baraf-daadashada barafka. Taasi waa, aag aad u ballaaran oo buuraley ah oo barafku ku ururo oo awood u leh inuu xajiyo xitaa xagaaga. Waa glacier yar oo wareeg ah. Goobaha barafka waxaa lagu uruuriyaa joogga u dhexeeya 2.500 iyo 3.000 mitir.
Waxa kale oo jira waqtiyo meelahaas loogu yeedho helero. Si kastaba ha noqotee, waxay u janjeeraa in loogu yeero in marka waxa ururayaa ay yihiin go'yaal baraf ah oo dhaca halkaas oo habeenno qabow ay ku dhalaalayaan biyaha dhalaalaya
Sidaad u aragto, dabeecadda waxay leedahay meelo aanu wadaag ka ahayn. Waxa ugu badan ee caadiga ahi waa in barafku da'o oo dhalaaliyo muddo kadib, kolkuu heerkulku kaco. Kiiskan, duufaanta barafka waxay awood u leedahay inay ku urursato waqti dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Snowdrift